What is HACCP | My Website
Public Channel / HACCP
"Hazard analysis and critical control points" isasystematic preventive approach to food safety from biological, chemical, and physical hazards in production processes that can cause the finished product to be unsafe, and designs measurements to reduce these risks toasafe level.
<iframe src="http://icsmyanmar.com/slides/embed/3?page=1" allowFullScreen="true" height="315" width="420" frameborder="0"></iframe>
1. ICS MYANMAR Endeavouring for Sustainable Future! HACCP www.icsmyanmar.com What is HACCP ( HAZARD ANALYSIS & CRITICAL CONTROL POINT )?  HACCP သည် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု၊ သိပံ္ပနည်းကျ အစားအသောက်၊ ဘေးဥပါဒ် ကင်းရှင်းမှု စနစ်ဖြစ်ပါသည်။  ကုန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ဘေးဥပဒ်ကင်းရှင်းသော၊ စားသောက်ကုန်များရရှိရန် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။  HACCP သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဇီဝဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ နှင့် ရူပဗေဒ နည်းအရ အစားအသောက်က ဘေးဥပါဒ်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ် တားဆီးလေဆာ့ချဖယ်ထုတ်ပေးသည့် အပြင် တစ်ဖန်ပြန်လည်၍ မညစ်ညမ်း၊ မကူးစက် စေရန် ကာကွယ်သော စနစ်ဖြစ်ပါသသည်။  ထို့  အပြင် HACCP သည် စံချိန်မှီ စီမံခန့်  ခွဲမှု စနစ်ကို ISO 9001 အရ အထောက်အကူပြုပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ HACCP သမိုင်းကြောင်း ?  HACCP နည်းစနစ်သည် (UN) United Nations ၏ (WHO) World Health Organization နှင့် (FAO) Food Agriculture Organization မှ တည်ထောင်ထားသော Codex Alimentaios Commission မှ အတည်ပြု ပြဌာန်းထားသော နိုင်ငံတကာ အဆင့်စံချိန် စံညွှန်းဖြစ်သည်။ HACCP ဖော်ဆောင်ရာ၌ HACCP အသင်းမှ လုပ်ဆောင်ရမည့် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် (၇) ချက်မှာ  လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များ သတ်မှတ်ပြီး တစ်ဆင့်ချင်းစီ ၌ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော hazard (Biological, Chemical, Physical) များကို သတ်မှတ်ပြီး ကာကွယ်ပုံ စနစ်များဖော်ဆောင်ရန်။  ဘေးဥပဒ် ဖြစ်နိုင်ချေ အမြင့်ဆုံးနေရာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးရန်၊  ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်နိုင်ချေ အမြင့်ဆုံးနေရာများ (Critical Control Points) ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ထိန်းချု ပ်မှု စနစ်ကို တည်ဆောက်ပေးရန်။  ယင်းနေရာများတွင် (Where, When, How ,Who, Frequency) သတ်မှတ်ပေးရန်၊  ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ရာ၌ သတ်မှတ်ထားသော စနစ်များကို ကျော်လွန်သွေဖယ်မှု ရှိပါက မှန်ကန်အောင် ပြန်ပြုပြင်ရန်၊  ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည့် နေရာအားလုံးကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ထားခြင်းရှိ မရှိကို လစဉ် သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရန်၊  ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ခြင်းမှ ရရှိသော ရလာဒ်များအားလု့းကို မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်း ပြုလုပ်ရန်တို့  ဖြစ်ပါသည်။
2. ICS MYANMAR Endeavouring for Sustainable Future! HACCP www.icsmyanmar.com What are the benefits of certification?  HACCP သည် အစားအစာ ဥပါဒ် ဖြစ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရာ ၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်( Cost Effective System) ကို သက်သာစေသော စနစ်ဖြစ်သည်။  သွင်းကုန်မှ တစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်  ဖြူးခြင်းမှသည် စားသုံးသူများ အထိ ကျင့်သုံးနိုင်သော စနစ်ဖြစ်သည်။  အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများမှာ  သင် ၏ Business Income ကို ကြာရှည်တည်တ့ံစေခြင်း  သင် ၏ ထုတ်လုပ်မှု ကြောင့် Customer ထံသို့  အစာအဆိပ်သင့်မှုမဖြစ်စေခြင်း၊  သင်၏ Company သည် အစားအစာဥပဒေ အရ ကျင့်သုံးလိုက်နာနိုင်ခြင်း။  သင့် Food Quality Standard မြင့်တက်ခြင်း။  သင့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တိုင်းတွင် ဥပါဒ်ကင်းေ သာ အစားအသာများကို သာ ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိခြင်း။  သင်၏ ဝန်ထမ်းများ အား စွမ်းရည်ပြည့်မှီ၍ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း ဟူသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိပါသည်။ ICS Myanmar, we are committed ...  နိုင်ငံတကာအတွေ့  အကြုံရှိ အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့  အစည်းဖြစ်၍ ISO 9001 လက်မှတ်ရရှိသည် အထိ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူပေးခြင်း၊  နည်းစနစ်ကောင်းများကို အကြံပြုဆွေးနွေး ပေးခြင်း၊  လက်မှတ်ရရှိပြီးပါကလည်း လိုအပ်သောအကြံဥာဏ်များကို ကူညီအကြံပေးခြင်း၊  အခြားသော မည်သည့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်အတွက်မဆို အကူအညီများ ရယူနို င်ခြင်း။
1334 Website Views
Moving From ISO:9001 2008 to ISO 9001:2015
ICS Myanmar - About us
.ICS Myanmar, the registered consultants company founded by international experienced professionals, offers ISO standards and other international standards consulting, training and helps organizations to understand and meet the requirements of various certifications including the ISO 9001 QMS, ISO 14001 EMS, ISO 22001 FSMS, OHSAS , HACCP, GMP and RMC among others.
Copyright © ICS Myanmar